14ka Waxqabad ee ugu Fiican ee lagu lammaaneeyo Xashiishadda • Dawooyinka Inc.eu
14ka waxqabad ee ugu wanaagsan ee lagu daro daroogada cannabis
Eeg midabada midabada adduunka, dareemo dabaysha, ku raaxee qorraxda ...
1 Dhageyso muusikada
2 Si aad u seexato
3 Si aad u qubeysato
4 Samee jimicsi weed
5 Nadiifi gurigaaga
6 La ciyaar carruurtaada
9 U shaqeynta fanka
10 Si casho loo aado
11 Bax, tag dabeecadda
12 Inta lagu jiro galmada, raaxo dheeri ah
13 Ducada iyo fikirka
14 La soco wararka (oo aan qaylin)
Doorashada xashiishadda cannabis waxay noqon kartaa daaweyn iyo yareyso dhowr shuruudood, laga soo bilaabo hurdo la’aanta iyo dhibaatooyinka soo raaca kiimikada. Laakiin sidoo kale waa dariiqa ugufiican ee lagu gaaro isku dheelitirka shakhsiga lana kordhiyo dareenkeena guud ee wanaag.
Liiska 14 hawlood oo kor u qaadi doona khibradahaaga xashiishadda:
Kursi raaxo leh gal, waxaad gashataa samaacado sameecado tayo wanaagsan leh oo xulo albam macno kuu leh adiga. Dadka badankood waxay isku raacsan yihiin inay kafiican tahay dhageysiga muusikada markii lagu dhagxiyo. Qeybta maskaxdeena ee xiriirisa fikradaha waxaa la kiciyaa markaan sareynay muusiguna waxaa ka buuxa sarbeeb iyo qaabab.
Si aad u seexato
Qaadashada hurdo la'aantu waa guntin haddii aad isticmaasho dawooyin fara badan. Waxaad u qulquli kartaa dhul fog oo fadhigaaga ah ama waxaad ku dhex dhici kartaa yaamays farxad leh oo hurdo ah. Nooca saxda ah ee xashiishadda cannabis ayaa kaa caawin kara inaad riyootid oo aad nasatid aad ubaahantahay. Haddii sigaar cabista iyo hurdadu aysan ahayn isku-habboonaanta kuugu habboon adiga, markaa waad awoodaa sidoo kale CBD Tijaabi badeecado aad si wanaagsan uga jawaabi kartid.
Si aad u qubeysato
Haddii aad daalan tahay ama haddii murqahaagu xanuunaan, qubays diiran ayaa had iyo jeer ku martiqaadaya. Markaad goobta ku diyaariso shumacyo udgoon iyo qaar ka mid ah heesaha nasashada leh, maxaad u ifin weyday wadajir? Sida iska cad, gacanta ku haysa laabatooyinkaaga waxay u baahan tahay inay ahaato mid qalalan, taas oo u baahan isuduwid yar marka aad biyaha fuuleyso. Laakiin markii aad ula qabsato tan, waxaad ku guuleysan doontaa daqiiqad qurux badan oo jireed iyo maskaxeed oo nasasho ah.
Samee jimicsi weed
Jirdhisku wuxuu noqon karaa khibrad daal badan: isla mashiinnadii hore, isla nidaamkii hore. Xalku muxuu yahay? Cusbooneysii jimicsigaaga adigoo abuuraya qaylo kahor intaadan dhidid. Xashiishku wuxuu kobciyaa dheef-shiid kiimikaadkaaga. Orodyahannada, waxay yareysaa caajiska ah in midba midka kale la hor dhigo. Ka sokow, waxa loogu yeero 'orodka sare'Waxay aad ugu egtahay khibrada xashiishka ee jimicsigaas wuxuu dhaqaajiyaa nidaamka endocannabinoid si la mid ah sida marka la cabayo xashiishadda.
Kuwa door bidaa mashiinnada jimicsiga, ee loogu talagalay inay ka takhalusaan kooxaha murqaha shaqsiyeed, cannabis waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wanaagsan diiradda u saarto foosha murqahaas. Dad badan oo yoga yoga ah ayaa ku dhaarta xashiishad sababta oo ah waxay yaraynaysaa fekerka toosan waxayna diiradda saaraysaa wacyiga ku saabsan neefsashada iyo akhbaarta saxda ah.
Qofna ma dhihi doono xashiishku wuxuu ka dhigayaa shaqada guriga mid xiiso leh. Laakiin ugu yaraan waxay ka dhigeysaa wax la qaadan karo. Xitaa haddii aad dib u dhigaysay toddobaadyo, buuq ayaa kugu celin doona jiritaanka nidaamsan. Halkii aad diirada saari lahayd jahawareerka iyo shaqada ay u baahan tahay si loo tirtiro, xashiishku wuxuu kuu suurtagelin doonaa inuu kuu horseedo dareen ah waxqabad - ilaa iyo farxad! Fiiro gaar ah u yeelo hababka fikirkaaga. Waxaad ka heli doontaa maskaxdaada inay ku raaxeysato sidaad u xoqdo musqusha. Waxay si farxad leh uga booddaa mawduuc ilaa mawduuc waxayna ku wareegsan tahay fikrado lagu farxo. Adiga ayaa xaliya dhibaatooyinka oo waxaad raadisaa xalal.
La ciyaar carruurtaada
Daawo caruurta yar yar oo ciyaaraya. Waxay la hadlaan alaabada ay ku ciyaaraan waxayna soo bandhigaan sheekooyin. Waxay ku nool yihiin adduun male-awaal ah. Nasiib darrose, dadka waaweyni caadi ahaan sidaas ma sameeyaan. Laakiin haddii aad rabto inaad ciyaarto ciyaartooda oo aad la kulanto adduunka sida ay u arkaan, waxoogaa faan ah oo wadajir ah ayaa xalka noqon kara. In kasta oo badankood ay doorbidaan in aan la sheegin, waalidiin badan ayaa leh xashiishadda waxay wanaajisaa xiriirka ay la leeyihiin carruurtooda. Waxay abuurtaa farxad iyo nacasnimo, oo soo saarta habab cusub oo aad ula ciyaarto carruurtaada. Waxa kale oo ay ku siin kartaa adiga dareen la yaab leh oo ay carruurtu si dabiici ah u leeyihiin.
Sida ugu dhakhsaha badan ee sharciyada kala fogeynta bulshada ay ugu wacan tahay corona nasashada, waxaa la joogaa waqtigii la siin lahaa xiriirkaaga internetka xoogaa nasasho ah isla markaana aad isku weydaarsato adeeggaaga qadka tooska ah ee fiidkii fiidyowga laga daawado shaashadda weyn. Qaado dhowr saacadood oo aad la degto shaneemo weyn oo mugdi ah, oo raaxo leh, taas oo wali ah goob aad u fiican oo lagu madadaalo, gaar ahaan haddii aad ku guuleysatay inaad xashiishad horay u qaadato. Dareennadaada oo dhami way aamusnaayeen aragga iyo dhawaqa mooyee. Sababtoo ah cannabis waxay umuuqataa inay dhiirrigelinayso naxariista, kaqeybgalkayaga waxqabadka shaashadda waa la xoojiyay (Xusuusnow: ka fogow filimada ficilka aan joogsiga laheyn oo leh qorshooyin ku lug leh shirqoolada dowladda, sida filimada Jason Bourne, maadaama ay u badan tahay inaad rajo la'aan ku lumi doonto).
Haramaha ayaa ka caawin kara waxa loo yaqaan 'block's writer'. Markii lagu dhagxiyo, wax yar ayaad ku qaadan kartaa inaad ka fikirto oo aad qorto waxa fikirkaaga, riyadaada, iyo riyadaadu ku saabsan yihiin. Xashiishku wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad si fudud uga fekerto jihada aad rabto inaad raacdo shaqadaada ama howlahaaga.
U shaqeynta fanka
Markaad sareyso, farshaxanka ayaa ka xiiso badan, muddo. Beddelaadda fikirka iyo aragtida ee dhacaya intaad sarreyso, farshaxanka aad soo saartey ayaa sida caadiga ah ka duwan kan aad caadiyan abuuri lahayd. Haddii aad rabto inaad xoogaa baashaaliso oo aad ka baxdo aaggaaga caadiga ah, cabbista qiiqa ka hor intaadan dheehaaga soo bixin waxay kuu horseedi kartaa natiijooyin cajiib ah.
Si casho loo aado
Malaha uma baahna in sharaxaad laga bixiyo? Hubso inaad gaajaysan tahay oo aad gaajaysan tahay, ka dibna xoogaa yar oo ah isku-darka ka hor intaadan aadin casho aad u wanaagsan. Waxaan ballan qaadeynaa in cunnadu wali noqon doonto mid la wada jeclaan karo. Waxaad la yaabi doontaa ashyaa kasta, maraq, saladh, macaaneeye iyo macmacaan qurxin oo aad miiska ku cuni doontid.
Bax, tag dabeecadda
Markaa badiyaa waxaan u qaadaneynaa dunida dabiiciga ah mid aan la dhayalsan karin. Laakiin way ina sugaysaa, waa na sugaysaa - xeebta, kaynta, buuraha, acres-ka dhulka bannaan ee aynu ku ducaysanay. Soo celinta isku xidhkaasi waxay muhiim u tahay fayo-qabka dadka waaweyn. Toos oo banaanka u bax - oo waqti qaado. Fiiri palette midabka adduunka, dareemo dabaysha, ku raaxee qorraxda. Welwelkaaga iyo dhibaatooyinkaaguba ha yaraadaan.
Inta lagu jiro galmada, raaxo dheeri ah
Run ahaantii, dhab ahaantii garan mayno sababta uu qof u galmoon doono isagoon sigaar cabbin! Caddayntu si weyn ayaa loosoo afjarayaa, laakiin dadka isticmaala xashiishadda ayaa sheegaya in jirkooda jidhku hagaago isla markaana muddada ficilada laftooda ay kordhaan. Cannabis waxay yareysaa walaaca, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si buuxda ugu raaxeysatid khibrada haddii aad siinaysid ama aad ku qanacsan tahay.
Ducada iyo fikirka
Marka loo eego Rastafarianism, “Geedaha ayaa fure u ah fahamka cusub ee nafta, koonka iyo Ilaah. Waa gaariga loogu talagalay miyir beelka ”. Cannabis wuxuu qayb muhiim ah ka ahaa ilbaxnimooyinkii iyo diimihii hore. Markuu geedka noqdo mid la aqbalo, xayiraadihii hore ee xagjirka ahaa ee ka digayay in wax adiga iyo Abuuraha abuuri doonaan ayaa dhacaya.
Masiixiyiinta jecel xashiishadda waxay si aad ah ugu sii kordhinayaan xiriir ka dhexeeya rumaystayaasha fikirka isku midka ah. Dabcan, uma baahnid inaad Ilaah rumayso si aad uga faa'iididiso faa'iidooyinka dib-u-xoojinta daroogada cannabis. Baarayaasha waxay ku adkaysanayaan in xashiishadda cannabis maskaxda dejiso isla markaana u oggolaato aamusnaan qoto dheer.
La soco wararka (oo aan qaylin)
Haddii ay mar uun jirtay waqti aan u baahan nahay gargaar ay xashiishku siiso, waa hadda. In ka badan seddexdii sano iyo bar ee la soo dhaafay, waxaan aragnay dagaal ka dhan ah socdaalka, dacwado ka dhan ah warbaahinta wararka, faragalinta Ruushka, naxariis darada booliska ee bulshada madow, iyo hada… COVID-19. Waqti aad horay u socoto oo aad aragto waxa xiga ee dhacaya, xusuusnow taas, waxaad dhahdaa, doorashooyinka waddan sida Ameerika ah ma foga!
Sources ao 420Science (EN), TheGrowthOp (EN)
Americasigaar cabistacannabiswaxbarashadacaafimaadkamusiccilmi baariscayaarahajimicsiMaraykanka
Haddii aad si joogto ah u isticmaashid xashiishad, mararka qaarkood ama mar uun, fursadaha ayaa kugu jira ...